Jenezy 22 - Ny Baiboly
Jenezy toko 22
Ny nizahan'Andriamanitra toetra an'i Abrahama - Ny taranak'i Nakora.
1Taorian'izany, nizaha toetra an'i Abrahama Andriamanitra ka nanao taminy hoe: Ry Abrahama ô! Ary hoy izy: Inty aho. 2Dia hoy Andriamanitra: Ento ny zanakao, ilay lahitokanao, ilay tianao, dia Isaaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary rehefa mby any, atero izy ho sorona dorana eo ambonin'ny anankiray amin'ny tendrombohitra hatoroko anao. 3Nifoha maraina koa Abrahama, nanisy lasely ny ampondrany, naka roalahy tamin'ny mpanompony hiaraka aminy, sy Isaaka zanany, ary namaky ny hazo hataina amin'ny sorona dorana, dia niainga nankany amin'ny tany efa nolazain'Andriamanitra azy.
4Nony tamin'ny andro fahatelo, nanopy ny masony Abrahama ka mbola lavitra ihany izy dia nahatazana ilay fitoerana, 5dia nilaza tamin'ireto mpanompony Abrahama nanao hoe: Mijanòna eto amin'ny ampondra hianareo, fa izaho sy ny zaza dia mikasa ho ery hivavaka, vao hiverina eto aminareo indray. 6Dia nalain'i Abrahama ny hazo hataina amin'ny sorona dorana, ka natataony an'Isaaka zanany, ary ny afo sy ny antsy kosa nentiny teny an-tanany, dia niara-nandeha izy mianaka. Fa hoy Isaaka tamin'i Abrahama rainy: 7Dada ô! Ka hoy ny navaliny: Inty aho, anaka. Dia hoy Isaaka: Ny afo sy ny kitay ireto dia efa eto, fa izay zanak'ondry atao sorona dorana kosa no aiza? 8Hoy ny navalin'i Abrahama: Hataon'Andriamanitra izay hahitana ny zanak'ondry hatao sorona dorana, anaka. Dia niara-nandeha izy mianaka.
9Nony tonga teo amin'ny fitoerana natoron'Andriamanitra azy izy, dia naorin'i Abrahama teo ny otely; nalahany ny kitay hazo, ary nafatony Isaaka zanany, ka napetrany tambonin'ny otely eo ambonin'ny kitay. 10Dia naninjitra ny tànany Abrahama ka nandray ny antsy hamonoana ny zanany. 11Tamin'izay niantso tany an-danitra ny Anjelin'ny Tompo nanao hoe: Ry Abrahama! ry Abrahama ô! ka hoy ny navaliny: Inty aho. 12Dia hoy ny anjely: Aza manainga ny tànanao hamely ny zaza, ary aza manino-maninona azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra hianao, sady tsy nandà hianao fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao ho ahy. 13Ary nanopy maso Abrahama, ka nahita ondralahy anankiray teo ivohony, voasingazotry ny kirihitr'ala tamin'ny tandrony; dia lasa Abrahama naka ilay ondralahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solon'ny zanany. 14Ary nataon'i Abrahama hoe Iaveh-Iereh ny anaran'io fitoerana io. Ary avy amin'izany ilay fitenenan'ny olona mandraka androany hoe: Ho hita ihany izany any an-tendrombohitry ny Tompo.
15Ary ny anjelin'ny Tompo niantso an'i Abrahama fanindroany tany an-danitra, ka nanao hoe: 16Efa nianiana tamin'ny tenako aho, hoy Iaveh, fa noho hianao nanao izany sy tsy nandà fa nahafoy ny zanakao, ilay lahitokanao, ho ahy, 17dia hanisy soa anao aho, hahamaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony. 18Amin'ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao.
19Dia niverina nankeny amin'ny mpanompony Abrahama, ka niainga izy ireo dia niara-nandeha nankany Bersabea. Ary nonina tao Bersabea Abrahama.
20Taty aorian'izany, nisy nampandre vaovao tamin'i Abrahama dia izao: Efa nitera-dahy tamin'i Nakora rahalahinao koa Melkà, 21dia Hosa lahimatoany, Boza lahiaivo, Kamoela rain'i Arama, 22Kaseda, Azao, Feldasa, Jedlafa ary Batoela. 23Batoela no rain-dRebekà. Izy valo lahy ireo no naterak'i Melkà tamin'i Nakora rahalahin'i Abrahama.
24Ilay vaditsindranony atao hoe Ramà koa dia niteraka an'i Tabea sy Gahama, ary Toasy sy Maakà. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0515 seconds